Amb. Franscisco Madiera ayaa sheegay inuu si dhow ula socday dhacdooyinkii u dambeeyay ee ka dhacay Koofur Galbeed, kaddib xariggii Mr Mukhtaar Roobow. Waxaa uu sheegay in aanay AMISOM qeyb ka aheyn xariggiisa iyo sidoo kale tallaabadii loogu soo duuliyay magaalada Muqdisho. – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Amb. Franscisco Madiera ayaa sheegay inuu si dhow ula socday dhacdooyinkii u dambeeyay ee ka dhacay Koofur Galbeed, kaddib xariggii Mr Mukhtaar Roobow. Waxaa uu sheegay in aanay AMISOM qeyb ka aheyn xariggiisa iyo sidoo kale tallaabadii loogu soo duuliyay magaalada Muqdisho.
Previous Gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal oo goor dhaw shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayuu uga hadlay xariga loo geestay Sheekh Muktaar Roobow Abuu Mansuur iyo rabshadaha ka dhacay magaalada Baydhabo.
Next Inta Badan Xildhibaanadda Diiday Mooshinka iyo Xirnaanshaha Golaha Shacabk